Forex Leverage | Forex တွင် Margin နှင့် Leverage ဆိုတာဘာလဲ၊ FXCC နှင့်အတူလေ့လာပါ
Forex သြဇာ & Margin
ဒါဟာလုံးဝသြဇာနှင့်အနားသတ်၏သဘောတရားများကိုနားလည်ရန်, မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှကုန်သွယ် Forex အသစ်နေသောအတွေ့အကြုံကုန်သည်များနှင့် client များအတွက်အရေးကြီးသော, ဒါမှမဟုတ်အမှန်ပင်အသစ်ဖြစ်၏။ များလွန်းမကြာခဏအသစ်ကကုန်သည်များရဲ့အရေးပါမှုဆုပ်ကိုင်နှင့်ဤနှစ်ခုအရေးပါသောအောင်မြင်မှုအကြောင်းရင်းများမိမိတို့၏အလားအလာအောင်မြင်မှုရလဒ်ကိုအပေါ်ရပါလိမ့်မယ် impact မှကုန်သွယ်စတင်ဖို့နဲ့ကျရှုံးဖို့စိတ်မရှည်ဖြစ်ကြသည်။
သြဇာ, ဟူသောဝေါဟာရကိုအကြံပြုအဖြစ်ကုန်သည်များသူတို့အကောင့်ထဲမှာရှိသည်နှင့်အလားအလာမဆိုအမြတ်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်, ဈေးကွက်ထဲမှာစွန်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၏အသုံးပြုမှုကိုတက်လီဗာရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများခုနှစ်တွင်; ကုန်သည် 1 ၏သြဇာကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက: 100 ပြီးတော့သူတို့တကယ်အန္တာရာယ်မှကျူးလွန်နေကြသည်တိုင်းဒေါ်လာစျေးချို့ယွင်းချက်စျေးကွက်အရပျ၌ 100 ဒေါ်လာထိန်းချုပ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များထို့ကြောင့်အလားအလာမဆိုအထူးသဖြင့်ကုန်သွယ်ရေး, ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ဖို့သြဇာ၏အယူအဆကိုအသုံးပြုပါ။
Forex ကုန်သွယ်မှာတော့ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်သြဇာယေဘုယျအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင်ရရှိနိုင်ပါအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သြဇာအဆင့်ဆင့်တို့သည် Forex ပွဲစားအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြပြီးအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်မှ: 1: 1, 1: 50, 1: 100, ဒါမှမဟုတ်ပင်မြင့်မား။ ပွဲစားကုန်သည်များသြဇာတက်သို့မဟုတ်ဆင်းကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ထားမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, FXCC မှာ (ကျွန်ုပ်တို့၏ ECN စံအကောင့်ပေါ်) ကြှနျုပျတို့၏အများဆုံးသြဇာ 1 ဖြစ်ပါသည်: 300, ဒါပေမယ့် client များတဲ့အနိမ့်သြဇာအဆင့်ကိုရွေးဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ကုန်သွယ်၏ 1 သြဇာတိုင်းဒေါ်လာစျေးသင့်ရဲ့အနားသတ်အကောင့်ထဲမှာထိန်းချုပ်မှု 1 ဒေါ်လာစျေး: 1 နှင့်အတူ
ကုန်သွယ်၏ 1 သြဇာတိုင်းဒေါ်လာစျေးသင့်ရဲ့အနားသတ်အကောင့်ထဲမှာထိန်းချုပ်မှု 50 ဒေါ်လာစျေး: 50 နှင့်အတူ
ကုန်သွယ်၏ 1 သြဇာတိုင်းဒေါ်လာစျေးသင့်ရဲ့အနားသတ်အကောင့်ထဲမှာထိန်းချုပ်မှု 100 ဒေါ်လာစျေး: 100 နှင့်အတူ
margin အကောင်းဆုံးကုန်သည်ကိုယ်စားကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသိုက်အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်သည်, တစ်ဦးကုန်သည်စျေးကွက်အရပျ၌တစ်ဦးအနေအထား (သို့မဟုတ်ရာထူး) ကိုဖွင့်ပြီးကိုင်ထားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏အကောင့်ထဲမှာအကြွေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အာမခံတက်တတ်၏အများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်, ဒီဟာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် Forex ပွဲစားများအကြွေးပူဇော်ကြပါဘူး။
အနားသတ်တွေနဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နှင့်သြဇာသုံးပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဦးအနေအထားသို့မဟုတ်ရာထူးဖွင့်ကိုင်ထားရန်လိုအပ်အနားသတ်ပမာဏကိုကုန်သွယ်ရေးအရွယ်အစားအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ အဖြစ်ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားအနားသတ်လိုအပ်ချက်များကိုတိုးတိုးပွားစေပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ ထား. , margin ဆိုတာကုန်သွယ်မှုကိုင်ထားရန်လိုအပ်ငွေပမာဏသည်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ကုန်သွယ်မှု။ သြဇာအကောင့်ရှယ်ယာထိတွေ့၏မျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကြှနျုပျတို့ရဲ့ margin ပွင့်လင်းနှင့်ကျွန်တော်သြဇာအကောင့်ရှယ်ယာနှိုင်းယှဉ်ထိတွေ့မှု၏မျိုးစုံကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ကြပါပြီကုန်သွယ်ရေးကိုင်ထားနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေပမာဏကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ကြပါပြီ။ ဒီတော့ဘယ်လိုအနားသတ်အကျင့်ကိုကျင့်နှင့်မည်သို့တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ရှင်းပြဖို့ဥပမာတစ်ခုကိုသုံးရန်ကြကုန်အံ့။
ကုန်သည်အထဲတွင်£ 10,000 ၏တန်ဖိုးနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် EUR / GBP ၏ 1 တွေအများကြီး (က 100,000 စာချုပ်) ကိုဝယ်ခြင်းငှါလိုလားလျှင်, သူတို့သည်အသုံးဝင်သော margin အတွက်£ 850 ထွက်ခွာအကောင့်တစ်ခုအတွက်အနားသတ်၏£ 9,150 တက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မယ်လို့ (သို့မဟုတ်အခမဲ့ margin), ဒီတစ်ခုယူရိုဝယ်ခန့်အပေါ်အခြေခံသည်။ တစ်ပေါင်ဟာအဲဒီအ၏ 0.85 ။ တစ်ဦးကပွဲစားကုန်သွယ်ရေးဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်စျေးကွက်အရပျ၌တာဖြစ်ပါတယ်ကုန်သွယ်မှုကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ကြောင်း, သူတို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ margin ကုန်သည်များနှင့်ပွဲစားနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အနားသတ်လိုအပ်ချက်ချိုးဖောက်လျှင်ကုန်သည်ကြီးများသူတို့၌ရှိကြ၏အနေအထားကိုအမြတ်အစွန်းဖြစ်လာပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်အရောင်းအတှေ့ရလိမျ့မညျဟုအမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ရေး, သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးအချိန်များတွင်၎င်းတို့၏အကောင့်ထဲမှာအနားသတ်၏အဆင့် (ချိန်ခွင်လျှာ) စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်ပိတ်ထားကြသည် ။ အဆိုပါအနားသတ်လိုအပ်သောအဆင့်ဆင့်ကိုအောက်တွင်အကယ်လို့, FXCC တစ်ဦး "margin ခေါ်ဆိုခ" အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအစပျိုးစေနိုင်သည်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ FXCC ကုန်သည်များနှင့်ပွဲစားနှစ်ဦးစလုံးမှ, ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်နိုင်ရန်အတွက်ရာထူးသူတို့ရဲ့ Forex အကောင့်သို့အပိုဆောင်းရန်ပုံငွေသို့ပေးသွင်းရမည်, ဒါမှမဟုတ်တချို့ (သို့မဟုတ်အားလုံး) ထွက်ပိတ်လိုက်ဖို့ကုန်သည်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စေ။
သေချာကုန်သည်စည်းကမ်းအမြဲထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နေတုန်း, ကုန်သွယ်အစီအစဉ်များ Creating သြဇာနှင့်အနားသတ်၏ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ပါတယ်။ ကွန်ကရစ်ကုန်သွယ်အစီအစဉ်ခံရမှုတစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်, အသေးစိတ်, Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, ကုန်သွယ်အောင်မြင်မှု၏အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ဂိတ်များ၏သမ္မာသတိရှိသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောနဲ့အကျိုးအမြတ်ကန့်သတ်အမိန့်ကို ယူ. , အလားအလာကုန်သည်များလန်းခွင့်ပြု, သြဇာနှင့်အနားသတ်၏အောင်မြင်သောအသုံးပြုမှုကိုအားပေးသင့်ပါတယ်ထိရောက်သောပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုမှဆက်ပြောသည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာတစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာအခြေအနေကိုသူတို့ကပိတ်ထားရပါမည်သည့်အခါ, ရှည်လျားလွန်းဘို့အရောင်းအဆုံးရှုံးဖို့အပေါ်ကိုကိုင်ပြီးနေတုန်း, လုံလောက်မှုမရှိမြို့တော်အတူသြဇာအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးပြုရန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထိရောက်ဆုံးမှတ်တိုင်များကို အသုံးပြု. ကုန်သွယ်မှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်အနားသတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ဝေးသဖြင့်အခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီသည်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်မှတ်တိုင်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အနားသတ်လိုအပ်ချက်အားချက်ချင်းပြန်လည်တွက်ချက်နေပါတယ်။
1 မှတက်သမျှသောလမ်း 1: 1 FXCC မှာရွေးချယ်ထားသော ECN အကောင့်ပေါ် မူတည်. clients များ 300 မှမိမိတို့လိုအပ်သောသြဇာ, ရွေးချယ်နိုင်သည်။ accounts@fxcc.net: ၎င်းတို့၏သြဇာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှာနေ clients ၎င်းတို့၏ကုန်သည်အချက်အချာဧရိယာကတဆင့်တောင်းဆိုမှုတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဒါလုပျနိုငျ
သြဇာသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုချီးမြှင့်နိုင်ပါ။ သငျသညျသြဇာ၏ mechanics ရဲ့နားလည်ကြောင်းသေချာပါစေ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်လွတ်လပ်သောအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြလော့။